I-Industrial Ultrasonic Equipment Factory - China Industrial Ultrasonic Equipment Equipment Abakhiqizi nabahlinzeki
Izinsiza kusebenza ze-Lab Ultrasonic
Isikali Esincane Sokujikeleza Kwe-Ultrasonic
5L Ukusakazwa System
10L Ukusakazwa System
20L Ukusakazwa System
Uhlelo Lokujikeleza Kwengilazi
Insimbi Yokusakazwa Kwensimbi Engagqwali
Izinsiza kusebenza ze-Industrial Ultrasonic
Isistimu Yezimboni Yesilinganiso Se-Ultrasonic Circulation
Uhlelo Lokujikeleza Oluhlukile
Okuqhubekayo Ukusakazwa System
Uchungechunge olwenziwe ngokwezifiso
Ukwenza ngokwezifiso kweTank Engagqwali
Isiyonke Isixazululo Sokwakhiwa Nokwenza Ngokwezifiso Komkhiqizo
Ukuhlakazeka kweCarbon Nanotubes
I-CBD Amafutha Emulsification
umshini we-ultrasonic plant pigments umshini wokukhipha i-pectin
i-ultrasonic ebalulekile ye-CBD emulsifier kawoyela
Imishini ye-Laboratory ye-ultrasonic enebhokisi elinomsindo
Iprosesa ye-Industrial ultrasonic liquid
Izinsiza kusebenza ze-Industrial Flow Ultrasonic Extraction Equipment
imishini yokusabalalisa ye-ultrasonic graphene
Idivayisi ye-Ultrasonic emulsifying yokucubungula i-biodiesel
Isisetshenziswa se-Ultrasonic liquid processing
I-lab ultrasonic probe sonicator
20Khz umshini wokusabalalisa we-homoegnizer we-ultrasonic
I-Ultrasonic homogenizing inqubo yokwenza ukunciphisa izinhlayiya ezincane kuketshezi ukuze ziba zincane ngokufanayo futhi zisatshalaliswe ngokulinganayo. Lapho ama-processor we-ultrasonic asetshenziswa njengama-homogenizers, inhloso ukunciphisa izinhlayiya ezincane kuketshezi ukuthuthukisa ukufana nokuzinza. Lezi zinhlayiya (isigaba sokuhlakazeka) kungaba okuqinile noma uketshezi. Ukwehliswa kobubanzi obusho izinhlayiya kwandisa inani lezinhlayiya ngazinye. Lokhu kuholela ekwehliseni pa isilinganiso ...
Umshini we-ultrasonic sonochemistry wokwelashwa ketshezi
i-ltrasonic sonochemistry ukusetshenziswa kwe-ultrasound ekuphendukeni kwamakhemikhali nezinqubo. Indlela ebangela imiphumela ye-sonochemical kuketshezi yinto ye-acoustic cavitation. I-acoustic cavitation ingasetshenziselwa izinhlelo ezahlukahlukene ezinjengokusabalalisa, ukukhipha, i-emulsification, ne-homogenization. Ngokuya nge-throughput, sinemishini ehlukile yokuhlangabezana nokufakwa kokucaciswa okuhlukahlukene: kusuka ku-100ml kuya kumakhulu amathani wemigqa yokukhiqiza yezimboni ngeqoqwana ngalinye. SPECIFI ...
Ultrasonic ukuhlakazwa sonicator homogenizer
I-Ultrasonic homogenizing inqubo yokwenza ukunciphisa izinhlayiya ezincane kuketshezi ukuze ziba zincane ngokufanayo futhi zisatshalaliswe ngokulinganayo. Ama-Sonicators asebenza ngokukhiqiza amagagasi amakhulu we-sonic kwimidiya ewuketshezi. Amagagasi engcindezi abangela ukusakazeka kuketshezi futhi, ngaphansi kwezimo ezifanele, ukwakheka okusheshayo kwama-bubble amancane akhula futhi ahlangane aze afinyelele usayizi wawo onamandla, adlidlizele ngamandla, futhi ekugcineni awe. Lesi simo sibizwa ngokuthi yi-cavitation. Implosion ...
Imishini yokusabalalisa ye-Ultrasonic
Imishini yokusabalalisa ye-Ultrasonic ilungele izixazululo ezahlukahlukene, kufaka phakathi izixazululo eziphezulu ze-viscosity. Amandla ajwayelekile avela ku-1.5KW kuya ku-3.0kw. Izinhlayiya zingasakazeka ziye ezingeni le-nano.
i-ultrasonic liquid processor sonicator
I-ultrasonic liquid processor sonicator inokusetshenziswa okuhlukahlukene, kufaka phakathi ukusheshisa ukusabela kwamakhemikhali kanye ne-catalytic, i-cell lysis, ukusabalalisa kwangaphambi kwesikhathi, i-homogenization, nokwehla ngosayizi. I-ultrasonic liquid processor sonicator yakhiwa iphenyo namandla kagesi. Iprosesa inekhiphedi ethintekayo, inkumbulo ehlelwayo, imisebenzi yokudonsa nesikhathi, amandla wokuvula / ukuvala okukude, ukuvikelwa kokugcwala ngokweqile, nesikrini se-LCD esibonisa isikhathi esidlulile kanye nokuboniswa kokukhishwa kwamandla. ukuhlangabezana nokwehluka ...
Iprosesa yokuqina okuphezulu, ukwenziwa kohlelo lobungcweti, intengo yokuthengisa enengqondo, isikhathi esifushane sokulethwa, ukuvikelwa okuphelele ngemuva kokuthengisa.
I-Hangzhou Precision Machinery Co., Ltd.